नेपालमा सुनको मुल्य कति ? हालसम्मकै महँगो « Tulsipur Khabar
नेपालमा सुनको मुल्य कति ? हालसम्मकै महँगो
नेपालमा सुनको मुल्य हालसम्मकै महँगो रहेको छ । लकडाउनका कारण बन्दाबन्दी रहेको अवस्थामा साढे दुई महिनापछि नेपालमा सुनचाँदीको मूल्य निर्धारण गरिएको छ । गत चैत ११ गते यता आईतवार मात्रै सुनको मूल्य तोकिएको हो।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार सुन (फाइन गुणस्तर)को मूल्य प्रतितोला ८७ हजार ४ सय रुपैयाँ पुगेको छ। यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो। यसअघि गत चैत १० गते लकडाउन हुनु अगाडी ७७ हजार रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो। साढे दुई महिनामा १० हजार ४ सय रुपैयाँले सुनको मूल्य बढेको हो।
नेपालमा लकडाउन भइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढिरहेकाले नेपालमा आइतबार एक्कासी ठूलो प्रभाव परेको महासंघले जनाएको छ।चाँदीको मूल्य पनि प्रतितोला २०५ रुपैयाँले बढेको छ। चैत १० गते प्रतितोला ७२० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी बढेर ९२५ रुपैयाँ पुगेको छ। अब दैनिक रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार सुनचाँदीको मूल्य निर्धारण गरिने महासंघले जनाएको छ।